जनगायक जीवन शर्माको व्यथा र ‘छ माया छपक्कै’को कथा ! « Gajureal
जनगायक जीवन शर्माको व्यथा र ‘छ माया छपक्कै’को कथा !
प्रकाशित मिति: ३० आश्विन २०७६, बिहीबार ११:०१
‘छ माया छपक्कै’ कम्युनिष्ट बिरोधी कथा हैन, सिद्धान्तलाई ब्यवहारमा उतार्न दबाब दिने चलचित्र हो । सिनेमालाई नाम र दाम काफी मिलेको छ । तपाईंको सिनेमाका बीजपात्र जीवन शर्माहरुलाई अप्ठेरो परेको बेला भरथेग गर्नुपर्छ है दीपकजी, थप बलियो शन्देश जान्छ ।
उल्का, अचम्म, अद्भुत, छक्क, ट्वाल्ल, सिरिङ्ग, झसङ्ग, ट्वाँ, सरप्राईज, सक्ड, हेर्याहेर्यै !
मिति : २०३७ साल, असोजबिषय : सिनेमा सम्बन्धमा आमाबाट प्राप्त पकेट खर्च : जम्मा एक
रक्सी र कम्युनिष्टको साईनो-सम्बन्ध !
*भवानी बराल ‘टुबोर्ग साईंला‘हर्कपुर, धरान । नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरुले रक्सी सेवनलाई कहिल्यै राम्रो दृष्टिकोणले हेरनन्